Inuu sheegay Malaa’ik badbaadisay, waxa uu ugu fadhiyay No. 52, inuu xabsi galay iyo dhacdooyin aan maanka galeynin oo laga diiwaan geliyay Nicklas Bendtner! Qaybta 4-aad. | Horumar Online
Inuu sheegay Malaa’ik badbaadisay, waxa uu ugu fadhiyay No. 52, inuu xabsi galay iyo dhacdooyin aan maanka galeynin oo laga diiwaan geliyay Nicklas Bendtner! Qaybta 4-aad.
Sanaddii 2012 tartankii Euro-ha, waxaa u billawday laacibkan dhibaato iyo mushkilado kale oo hoos usii dhigay xirfaddiisa.
Waxaa la ganaaxay £80,000 iyo hal kullan ka dib markii isagoo gool u dabaal dagayo uu hoos u dhigay daba-gaabkii (buumada maaliyadda), si uu usoo muujiyo magaca “Paddy Power” oo ku qornaa hoos-gashida daba-gaabka ka hooseeya.
Xilli ciyaareedkii xigay waxa uu u dhaqaaqay dhanka koxda Juventus oo uu amaah ku aaday 2013, intii uu ka tirsanaa kooxda Turin ka dhisan, waxaa laga ganaaxay gaari-wadista muddo saddex sanadood ah, sidoo kalena £100,000 ayaa la ganaaxay maadaama uu isagoo cabsan baabuur ku dhex waday Copenhagen.
Sidoo kale Bendtner ayaa laga ganaaxay xulka qaranka Denmar muddo lix bilood ah ka dib markii uu ku xad-gudbay sharciga gaari wadista, isla markaasna ay is qabteen Police-ka.
Inkastoo markii uu Sunderland joogay carrabka ku dhuftay inuusan ku laaban doonin Arsenal, September 2013 waxa uu Arsenal u saftay kullankiisii ugu horreeyay muddo labo sano.
2014 waxaa markale soo laabtay dhibaatooyin kale oo uu dhexda ka galay.
Bendtner waxaa lagu soo eedeeyay in ay isku dheceen darawal Taksi ka hor inta uusan surwaalka hoos u dhigin, isla markaasn xubintiisa ku tirtirin baabuurka.
Mar uu la hadlayay wargeys kasoo baxa dalkiisa ayuu yiri: “Dadka waxay u maleeyaan inaan waallanahay. Sawirka ay dadka iga heystaan, keliya waa inaan xaflad ku jiray. Aniga waan ka duwanahay ciyaarista kubadda cagta- dabcan waa mid aad uga fog xaqiiqda”.
Ka dib waxa uu kusoo laabtay Ingiriiska isagoo ka mid noqday Nottingham Forest, hadda waa 30-jir, waxaana uu ka tirsanyahay kooxda Rosenborg oo Norway ka dhisan.
Toddobaadkii lasoo dhaafay, waxaa lagu soo xukumay xabsi 50 maalmood ah ka dib markii uu diiday inuu bixiyo £5m oo ahayd lacag uu taksi ku raacay, inkastoo ugu dambeyn uu racfaan ka qaatay.